ရန်လင်းအောင် – ပြောဇာတ် ( ၈ ) | MoeMaKa Burmese News & Media
ရန်လင်းအောင် – ပြောဇာတ် ( ၈ )
ဗာရာဏသီ ဥသီနကမင်း လက်ထက်တုန်းကပေါ့
သြော် . . . ပျော်စရာအတည်ရယ်လို့မရှိ
“ လောကကြီးပျက်တော့မယ် ”
“ လောကကြီးပျက်တော့မယ် ” အော်လို့ ဟစ်လို့
ဘိုးသိကြား က မုဆိုးကြီးလို
မာတလိ က ခွေးနက်ကြီးလို ဖန်ဆင်း
လူ့ပြည်ကို ချက်ချင်းဆင်းချလာပါပေါ့၊
တနိုင်ငံလုံး နန်းရင်ပြင်ထဲ ၀ရုန်းသုန်းကား
ပြဿ ဒ်ပေါ်တက်ပြေးသွားပါသတဲ့ ။
“ ဒီခွေးနက်ကြီး နန်းတွင်းထဲ ဘယ့်နှယ်
တွင်တွင်ထိုးဟောင်နေရသလဲ မုဆိုးကြီးရဲ့ ”
“ ရန်သူ့ အသား စားချင်လို့
အကျင့်ပျက်မှန်ရင် ဒီခွေးနက်ကြီးရဲ့ ရန်သူ ပဲ”
ခုတလော မကြာမကြာ သတိရမိပါရဲ့ ၊
ကမ္ဘာလောကကြီး သာယာဖို့
ဘိုးသိကြားရဲ့ ပါဖောမ်မန့် နဲ့
မာတလိ ရဲ့ ပါဖောမ်မန့် နဲ့
ညစ်ပွဲတွေ စစ်ပွဲတွေ ရပ်တန့်စေဖို့
မုဆိုးကြီးရေ . . . လာပါတော့
ခွေးနက်ကြီးရေ . . . လာပါတော့ . . . ။ ။
ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်တော်၊ ဒွါဒသကနိပါတ်၊ မဟာကဏှဇာတ်တော် ကိုမှီးပါသည် ။